Tsidiho ny Nosy Museum ao Berlin | Vaovao momba ny dia
Nosy Museum any Berlin
La fitsidihana any Berlin dia mitondra fahagagana mahaliana maro ho antsika. Tanàna feno tantara izy io izay afaka manolotra fahitana samihafa momba ny kolontsaina antsika koa ary be dia be ny mahita. Ny iray amin'ireo zavatra izay tokony tsy tokony ho adino amin'ny diantsika mankany Berlin dia ny Islandy Museum na Museumsinsel amin'ny fiteny alemanina.
La Nosy Island Museum dia nosy noforonin'ny renirano Spree ao afovoan'i Berlin izay misy ny tranombakoka manan-danja indrindra ao an-tanàna. Zava-dehibe ara-kolontsaina io nosy io ary nambaran'ny UNESCO ho vakoka manerantany.
1 Tantaran'ny Nosy Museum
2 Tranombakoka taloha na tranom-bakoka Altes
3 Tranombakoka Vaovao na Tranombakoka Neues
4 Tranombakoka Pergamon
6 The Old National Gallery
7 Katedraly Berlin
Tantaran'ny Nosy Museum
Museum Island dia manana tantara lava. Ny faritra avaratry ny nosy dia toerana onenan'i King Frederick William IV avy any Prussia natokana ho an'ny kanto sy ny siansa. Ny tranombakoka voalohany nahatratra ny lazany iraisam-pirenena dia napetraka tamin'ity faritra ity. Maromaro amin'ireo mpanjaka Prussianina no nampiroborobo ity hetsika ity tamin'ny voalohany, saingy taty aoriana, efa tamin'ny taonjato faha-XNUMX, dia lasa ampahany amin'ny fototra iorenan'ny Foundation of the Prussian Cultural Heritage, izay miandraikitra ny fitazonana ireo tahiry sy tranombakoka. Ny fanangonana tranombakoka dia mampiseho ny tantaran'ny zanak'olombelona hatramin'ny fahagola ka hatramin'ny taonjato faha-XNUMX. Nandritra ny Ady Lehibe Faharoa dia rava ny tranombakoka sasany ary nosarahina tamin'ny Ady mangatsiaka ny fanangonana nefa tafaraka indray. Eto amin'ity Nosy Museum ity dia azonao atao koa ny mahita ny Katedraly Berlin sy ny Garden of Pleasure na Lustgarten.
Tranombakoka taloha na tranom-bakoka Altes
Araka ny lazain'ny anarany, izy io no tranombakoka tranainy indrindra amin'ny Museum Island, notokanana tamin'ny 1830. Ny trano dia iray amin'ireo voalohany eto an-tany izay noforonina ho tanjona tokana amin'ny maha tranombakoka azy. Misongadina izy io amin'ny fananana fomba neoclassical voamarika, izay mahatonga ny fananganana firavaka ho azy. Ato amin'ity tranombakoka ity dia ahitantsika fanangonana zavakanto sy sary sokitra maharitra hatramin'ny andro fahagola, avy Gresy taloha sy ny Fanjakana Romanina. Mampiavaka azy io amin'ny fananana ny tratra malaza an'i Cleopatra ary koa ny fanangonana zavakanto Etruscan lehibe indrindra.
Tranombakoka Vaovao na Tranombakoka Neues
Fotoana fohy taorian'ny nahavitan'ny Tranombakoka Taloha, ny fananganana ny Tranombakoka Vaovao eto amin'ny nosy. Simba be tamin'ny Ady Lehibe Faharoa, mbola tavela mandra-pahatongan'ny famerenana amin'ny laoniny ny taona 1999, izay haharitra sivy taona. Ato amin'ity tranombakoka ity dia aseho ny tantaran'ny kolotsaina razana manerana an'izao tontolo izao. Trano neoclassical hianarana momba ny tantaran'ny olombelona hatramin'ny vanim-potoana vato hatramin'ny vanim-potoana afovoany. Ato amin'ity tranombakoka ity dia hitantsika ny karandohany Neanderthal an'i Le Moustier na ny tratran'i Nefertiti.
Ity no tranombakoka be mpitsidika indrindra any Berlin ary manana elatra telo. Mbola eo am-pamerenana amin'ny laoniny ny tranombakoka, zavatra haharitra mandritra ny taona maro, ka rehefa mitsidika elatra sasany isika dia mety hikatona. Azo takarina toy ny hoe tranombakoka telo izy ireo tsy mitovy amin'ny an'ny fahagola taloha, Afovoany Atsinanana sy ny Art Silamo. Ny ampahan'ny kintana dia ny vavahady romana ao amin'ny tsenan'i Miletus, ny Alitara Pergamon, ny vavahady Ishtar na ny Mushatta Facade.
Ny Bode Museum dia any avaratry ny nosy no misy azy. Io no tranombakoka iray hafa izay simba tanteraka tamin'ny Ady Lehibe Faharoa ary nila fotoana ny fanarenana azy indray. Eto amin'ity tranombakoka ity dia azonao atao ny mitsidika ny Fanangonana sary sokitra, ny fanangonana zavakanto Byzantine ary ny Kabinetra Numismatika. Mahita tranombakoka misy zavakanto kanton'ny kanto eropeana izahay. Anisan'izy ireo no ahitantsika an'i 'La Madonna Pazzi' nataon'i Donatello, sary sokitra an'ny Dancer nataon'i Antonio Canova na sarcophagus romana taloha. Ao amin'ny faritra numismatika dia azontsika atao ny mahita ny iray amin'ireo tahirim-bola lehibe indrindra eto an-tany miaraka amin'ny vola madinika sy medaly hatramin'ny 4.000, mandra-pahatongan'ny euro. Toerana tena mahaliana ho an'ireo manana fialam-boly numismatika.
Amin'ity galeriana ity dia ahitantsika ireo sanganasa avy amin'ny Classisme, Romanticism, Impressionism ary ny zavakanto ankehitriny. Afaka mahita sary hoso-doko avy amin'ny mpanakanto toa ianao Renoir, Monet, Manet na Caspar David Friedrich. Ao amin'ny galerianao dia azonao atao ihany koa ny mahita ny sarivongana mpitaingin-tsoavaly varahina an'i Frederick William IV sy ny sanganasan'ny artista Berlin Adolph Menzel. Misy ihany koa ireo sanganasan'ny mpanakanto hafa toa an'i Max Lieberman na i Carl Blechen.
Ao amin'ny Museum Island dia afaka mahita ny Katedraly Berlin koa isika. Vita tamin'ny taona 1905, io no tranom-pinoana manandanja indrindra ary miavaka amin'ny dome goavambe amin'ny loko maitso. Teo akaikin'ity trano ity dia ny lapan'ny mpanjaka, noho izany dia zava-dehibe ny katedraly. Tamin'ny Ady lehibe II dia simba be ihany koa ity trano ity, mitaky fanarenana an-taonany maro.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » tanàna » Berlin » Nosy Museum any Berlin
Dia mankany Islandy
Inona no ho hitanao any Amsterdam afaka 3 andro